को’रोनालाई हराउन गाईको दुध बन्यो चिनियाँ हति-यार ! – Yuwa Aawaj
को’रोनालाई हराउन गाईको दुध बन्यो चिनियाँ हति-यार !
बैसाख २८, २०७८ मंगलबार 483
एजेन्सी : अहिले विश्वभरी नै को’रोनाको महाम’रीले आ’तंक मच्चाइरहेको भए पनि केही देशहरुले भने यो केही हदसम्म भए पनि नियन्त्र’ण पाएका छन्।
को’रोनाको सम्भावनालाई कम गर्नका लागि मानिसहरु खोप लगाउनेदेखि जीवनशैलीमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरु गरिरहेका छन् । यसैबीच, चीनका मानिसले को’रोनालाई हराउनका लागि गाईको दुधको साहरा लिइरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
शरीरमा प्रोटीनको मात्रा बढाउनका लागि चीनको सरकारले त्यहाँका मानिसलाई धेरैभन्दा धेरै गाईको दुध पिउन भनि रहेका छन् । प्रोटीनले इम्यून सि’स्टम बलियो बनाउँछ भन्ने दावी गरिहएको छ । पछिल्लो वर्ष को’रोना फैलिएपछि चीनको संसदको वार्षिक बैठकमा त्यहाँका कानून निर्माताहरुले सरकारलाई दुध पिउने बारेमा पनि कानून बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
जसमा हरेक व्यक्तिले प्रतिदिन कम्तिमा ३०० ग्राम दुध पिउने सल्लाह दिइएको थियो । ब्लुम’बर्गको रिपोर्ट अनुसार शांघाई केहुआ’शान अस्पतालमा सं’क्रामक रोग विभागका प्र’सिद्ध डाक्टर झांग भेनहोंगले सं’क्रमणको शुरुवाती क्रममा चीनका अभिभावकहरुलाई एउटा विशेष सल्लाह दिएका थिए ।
डाक्टर भेनहोंगले आमा बुबा दुबैले आफ्ना बालबालिकालाई बिहान दुध र अण्डा खान शुरु गर्नु भन्ने सल्लाह दिएका थिए । ब्रेकफास्टमा पो’र्रिज दिन बन्द गर्नु पर्छ । चीनका विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्ले’टफर्ममा दुध पिउने बाध्यतालाई लिएर वहस पनि चलेको थियो । चीनमा प्रायस् मानिस ब्रेक फास्टमा बन र पोर्रिज खान्छन् ।
आफ्नो परम्प’रागत खाजा छाडेर दुध र टोस्ट खानु कति सम्म सही हो भन्ने चीनका मानिसहरुको भनाइ रहेको छ । चीनका केही मानिसहरु त्यहाँको पर’म्परागत भोजन र दुधबाट प्राप्त हुने पो’षणको तुलना पनि गरिरहेका छन् । चीनको परम्परागत खानापानमा एनिमल प्रोटीन धेरै हुन्छ भन्ने त्यहाँका मानिसको भनाइ छ।
खानपानमा कुनै पनि किसिमका परिवर्तनले कोरोना भाइरस हुनबाट बचाउन सक्दैन र भोजनमा प्रोटीन समावेश गर्ने अरुपनि धेरै तरिका भएको चीनका मानिसहरुको धारणा रहेको छ । चीन सरकारले सन् २०२५ सम्म ४ सय ५० लाख टन दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन अहिलेसम्मको उत्पादन भन्दा ३० गुणा धेरै रहेको छ ।
चीनमा गाईको हेरचाह र खानपानमा पनि अहिले विशेष ध्यान दिन थालिएको छ । यद्यपि चीनका विभिन्न पशु कल्याण समूहले विभिन्न अध्ययनलाई आधार बनाएर यस कुरामा आपत्ति जनाएका छन। उनीहरुले गाईको दुध पिउनाले क्यान्सर, मधुमेह र मुटु सम्बन्धि विभिन्न समस्या हुन सक्ने बताएका छन् ।
चीनका प्रायस् मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा दुध पिउने बानीलाई बढावा पनि दिइरहेका छन् । धेरै दुध पिउनेहरुको छुट्टै समुह बनाइएको छ, जहाँ मानिसहरु आफुलाई मन परेको ब्रान्ड र दुधबाट बनेको रेसिपी शेयर गरिरहेका छन् । जुन मानिसलाई दुध पचाउन गाह्रो हुन्छ, उनीहरुका लागि पनि विभिन्न किसिमका उपायहरु बताइन्छ ।
दुध न्यूट्रि’शनले भरि पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भइसकेको छ । केही विशेषज्ञहरुका अनुसार पशुहरुमा एउटा विशेष किसिमको एन्टिबडी पाइन्छ। दुध पिउनाले उक्त एन्टिबडी शरीरमा गएर इम्यून सिस्टमलाई बलियो बनाउँछ। एजेन्सीको सहयोगमा
Prevसंक्र-मितलाई दुध-बेसार खान भारत सरकारको सल्लाह ।
Nextरबि लामिछाने भन्नुहुन्छ : अहिले लाई अक्सिजन भन्दा ठूलो केही देखिन, भन्दै गराए यस्तो जानकारी ।
ब्रेकिङ : हावाहुरीसहितको असिना पानीका कारण खेतीबालीमा क्ष’ति !
महामा’रीमा का-लोबजारी – मूल्य आकाशिदै, मा’रमा जनता !
यी नेताले छोड्दै छन् माधव समुह, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्ट ओली संग मिल्ने !